I-lira yaseTurkey yengozi kumaxesha onke asezantsi ngokuchasene nedola yaseMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » I-lira yaseTurkey yengozi kumaxesha onke asezantsi ngokuchasene nedola yaseMelika
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
I-lira yaseTurkey yengozi kumaxesha onke asezantsi ngokuchasene nedola yaseMelika.
Ekugqibeleni, izigqibo zomgaqo-nkqubo wezemali waseTurkey azisathathwa yibhanki enkulu uqobo kodwa zithathwa kwiNdlu kaMongameli.
I-lira yaseTurkey ichithe iipesenti ezingama-20 kulo nyaka kwaye isiqingatha sokuhla kwexabiso sivele kwasekuqaleni kwinyanga ephelileyo.
Owona mlingisi mibi kwiimarike ezisakhulayo kulo nyaka, imali yaseTurkey ichukumise ezantsi nge-9.3350 ngokuchasene nedola namhlanje.
I-Societe Generale iqikelele ukusika kwamanqaku ali-100 kulandele ikhefu yibhanki esembindini njengoko i-lira islayida yaya kwi-9.8 xa ithelekiswa nedola ngokuphela konyaka.
Owona mlingisi mibi kwiimarike ezisakhulayo kulo nyaka, i-lira yaseTurkey itshone kumgangatho omtsha ophantsi ngokuchasene nedola yaseMelika namhlanje.
Imali yaseTurkey ichukumise ezantsi nge-9.3350 ngokuchasene nedola ngaphambi kokulinganisa ilahleko. Yema ngo-9.31 nge-18: 22 GMT.
Abahlalutyi bezezimali ababoni mpu melelo kwimali yelizwe laseTurkey enengxaki, xa kuthathwa into umntu ayilindeleyo kwinzala “engekho ngqiqweni” eyehliswe ngasekupheleni kwale veki.
I-lira yaseTurkey ichithe iipesenti ezingama-20 kulo nyaka kwaye isiqingatha sokuhla kwexabiso sifikile kwasekuqaleni kwinyanga ephelileyo, xa IBhanki eNkulu yaseTurkey Ndiqale ukunikezela ngemiqondiso eyothusayo ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso kufikelela kuma-20 epesenti.
ETurkey UMongameli u-Recep Tayyip Erdogan Kudala efuna ukuba kuncitshiswe imali kwaye ifuthe lakhe, kubandakanya nokutshintsha ngokukhawuleza ubunkokheli obuphezulu bebhanki, kubonwe ngathi lonakalise ukuthembeka komgaqo-nkqubo kule minyaka idlulileyo.
Emva kwenyanga ephelileyo ukothuka kwamanqaku e-100 athumele i-lira, i-economists evotelwe yi-arhente yeendaba yeReuters yahlulwa malunga nokuba ingaba ibhanki engundoqo iyakuncipha ngamanye amanqaku angama-50 okanye ali-100 kwintlanganiso yomgaqo-nkqubo wangoLwesine.
Ezinye zezoqoqosho zenqabile ukuphendula kuvoto ngenxa yokuba ibhanka engalindelekanga sele iqhelekile, ngakumbi emva kokuba u-Erdogan egxothe amalungu amathathu ekomiti yomgaqo-lawulo wemali (MPC) kwiveki ephelileyo, kubandakanya nababini ababonwa ngokuchasene nokucutha ireyithi.
“Ekugqibeleni izigqibo… zomgaqo-lawulo wemali azisathathwa yibhanki engundoqo ngokwayo kodwa zithathwa kwiBhotwe likaMongameli,” batsho abahlalutyi beCommerzbank.
Emva kwebhanki yakhe yokugqibela, Erdogan "Uyisusile ngokufanelekileyo yonke inkcaso kumbono wakhe ongaqinisekiyo wokuba inzala ephezulu ibangela ukunyuka kwamaxabiso aphezulu", abahlalutyi beSocGen babhala kwinqaku labathengi.
Ngaphandle “kokungabi nangqondo” kokuncitshiswa kwamazinga ngoku, “akusekho ndawo yokuchaza iingxoxo zemveli zoqoqosho xa kuthathelwa ingqalelo indlela [yebhanki esembindini] enokwenzeka,” babhala.